Banye na eCommerce na talọ oriri na ọ Resụ |ụ | Martech Zone
Akingbanye na eCommerce na talọ oriri na ọtaụtaụ
Fraịde, Ọgọstụ 10, 2007 Wednesday, November 30, 2011 Douglas Karr
Izu a bụ izu mbụ m dị ka Director of Technology maka Okporo ụzọ. Otu ụlọ ọrụ na-eto eto na teknụzụ, Patronpath enweela mmetụta dị ukwuu na ụlọ ọrụ ịtụ ahịa na ntanetị.
N'adịghị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Patronpath elebara anya na ngwanrọ ha ma na Ahụmịhe Onye ọrụ na Mwekota. Kama ịmepụta ngwanrọ maka onye zụrụ ya, ha na-elekwasị anya na ịmepụta ngwanrọ maka onye ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ arụwo ọrụ dị egwu ma na mmepe na teknụzụ n'ihi na ha enwebeghị n'ezie guru teknụzụ 'nwere' ngwa ahụ. Agwaara m onyeisi ụlọ ọrụ Mark Gallo taa ma enweghị m ike ịkọwapụta otú masịrị m.
Companylọ ọrụ ahụ adịla ngwa, na-agbanwe azụmahịa ha ngwa ngwa n'ebe ndị Restaurateurs chọrọ ha. Ndị otu dị ịtụnanya. Ihe omuma ha banyere ulo oru a bu ihe n’eme ka ihe nile gha aru oru.
N'ileghachi anya na ulo ahia Restaurant, ị nwere ike iche na m bụ akụ iji waba n'ime egwu a. Ọkara nke ụlọ oriri na ọ allụ failụ niile dara na oke uru na nkezi ndị na-abụghị agbụ, ụlọ oriri na ọ familyụ familyụ ezinụlọ dị obi ọjọọ. Ihe dị iche n'etiti ụlọ oriri na ọ successfulụ aụ na-aga nke ọma na ụlọ oriri na ọ aụ aụ na-akụda mmụọ nwere ike ịdị gịrịgịrị dị ka ntutu isi… nke ahụ bụ ebe Patronpath na-abata.
Nke a bụ ihe kpatara iwu ịntanetị ji eme ihe dị iche:
Ndị mmadụ na-enye nri karịa mgbe ha na-enye iwu maka ịpụ na nnyefe. Chee echiche banyere ya… mgbe ị kpọrọ ezinụlọ gị gaa n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ị ịtụ ịtụ Pizza maka tebụl. Mgbe ị na-enye iwu nnyefe, ị na-enye iwu maka nri ụtụtụ ma ọ bụ nri abalị.
Ndị mmadụ na-achọ mma ka karie. Lọ ahịa nri na-emechi ma agbụ ụlọ oriri na ọ areụ areụ na-eto. Ihe kpatara ya bụ ihe dị mfe, anyị chọrọ iwepụtakwu oge iji soro ndị ezinụlọ anyị na-enye ndụ dị oke mkpa na obere oge ịzụ ahịa na isi nri. Ọ bụrụ na ị nwere ike nweta ezigbo nri maka ezinụlọ gị ma bulie ya n'ụzọ, ị ga! Iri nri bụ ọsọsọ… mana ị mepee nri n'ụlọ gị ka na-ahapụ ndị ezinụlọ gị ịgbakọta na tebụl.
Nnukwu usoro ịntanetị na-ebelata ịhazi njehie ma na-ewe obere ọrụ ndị ọrụ! Ọ na-esiri gị ike imebi iwu mgbe ị bụ onye na-etinye ya ọnụ, nri?
Ma, a ka nwere ọtụtụ ọrụ ị ga-arụ. Na naa sistemụ ka bụ ihe ochie. Na-abanye n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ụlọ ahịa ị ga-ahụ POS siri ike na-agba ọsọ na Windows 95 ma na-arụ ọrụ na nchekwa data Access! Chọpụta, e nwere a jụụ ihuenyo mmetụ… ma ụlọ ọrụ mfri eke maka a kpọrọ ihe ọkpụkpọ na-abịa na ọcha ụlọ.
Online ịtụ usoro na-eme ka ihe dị iche. Tinye n'ọrụ API na naa, Faksị, na Email mwekota - restaurateurs bụ free ime ihe ha na-eme kacha mma… na-ere a otutu oké nri na ọrụ mgbe na-agbakwunye ma ndị ọzọ na ibu iwu! Nke ahụ bụ ebe anyị batara. Anyị nwere ụfọdụ ọmarịcha ngwa ị ga-ahụ iji kwere. Companylọ ọrụ na ụlọ ọrụ chara acha maka ịnara ma anyị ga-abụ nke kachasị mma!
Lee Indianapolis, anyị na-emejuputa ngwanrọ anyị Tylọ ụlọ ahịa Scotty.
Na-abanye na Scotty ọ bụla, ị ga-achọpụta ozugbo na ahụmịhe metụtara onye ọrụ yana ijikọta nke ahụ na teknụzụ. Maka gị Fans Fans, oche ọ bụla na Scotty bụ oche dị n'ihu ebe ụlọ ntu ọ bụla nwere nke ya LCD telivishọn! Jide n'aka na lelee ha maka nri ehihie… ha nwere nnukwu $ 5 menu!
Gbalia igwa ha na Doug si Okporo ụzọ zitere gị!
A Bare Barebones Kọmputa Akụkọ maka gị…
SQL: Aha nyocha zuru oke maka States na Provinces maka US na Canada
Ọgọstụ 22, 2007 na 10:33 ehihie
Emeela m ntọala ngwa google ole na ole mana naanị maka email.
Ibe mmalite ahụ ị mere dị mma.
M ga-anwale nke ahụ
Mee 28, 2012 na 4: 23 PM
Ahụla m ngwọta ọhụrụ nke a na-akpọ Eri Online nke yiri ka ọ
ọbụna ngwa ngwa na mfe karịa ndị ọzọ, ị hụrụ ya?